Serrano Glacier, Serrano Ice Box - Puerto Natales
Adiresy: Bernardo O'Higgins National Park, Puerto Natales, Chilie;
Sehatra: Sehatry ny maso, glacier Balmaceda.
I Chili dia malaza amin'ny valan-javaboary voajanahary, izay misy ny ranomandry. Ity dia firenena iray misy ranomandry sy lelafo, satria eto dia azonao jerena ny fomba ipoiran'ny faritra midadasika any amin'ny tany lemaka midadasika amin'ny lozam-piaramanidina goavam-be. Ny fitsidihana ny valan-tsehatry ny Bernardo O`Higgins , ireo mpizahatany dia nentina tany amin'ny glacier Serrano, izay fahitana mahatalanjona.
Serrano Glacier Description
Ny glacier dia miorina avaratra-andrefan'ny tanànan'i Puerto Natales ary ampahany amin'ny Andes. Noho ny tsy fahafantarana, ny tanan'olombelona dia tsy afaka manimba ny toetran'ny manodidina. Ny toerana misy ny seranam-piaramanidina Serrano no avaratra eo avaratra amin'ilay tendrombohitra. Mba hanakaikezana azy dia tsy maintsy miala amin'ny ranomasina ianao, fa amin'ny ala arivo taona, eo amoron'ny farihy mangatsiatsiaka. Aorian'izany dia misy lozisialy hafa - Balmaseda , izay malaza amin'ny mpizaha tany.
Matetika ny fitsangatsanganana dia mifamory mba tsy handany fotoana, ary hitsidika azy roa ireo. Ny fiomanana ny handeha amin'ny lamasinina dia ilaina ny mipetraka amin'ny akanjo mafana, satria mangatsiaka be izany. Ny mari-pana dia ambany ambanin'ny zero. Ny oram-batravatra izay mianjera manodidina ny glacier dia lanezy, indraindray dia mety hianjera hatramin'ny 2000 mm isan-taona.
Mankanesa any amin'ny faritra tsy misy ilana azy
Ireo mpizaha tany tonga any Porto Natales mba hahita toerany hafa dia mijanona elaela na andro na roa mba hijery ny Serrano Glacier. Azonao atao izany raha mividy fitsidihana an-tsena. Ny hatsaran-tarehy manenika ny faritra dia ny hany vidin'ny vidin'ny fitsangatsanganana iray, ny tapakila ho an'ny olona iray dia mitentina 150 dolara.
Mandritra ny dia an-dranomasina, dia hisy zavatra tokony hankafizina, ankoatra ny sakana amin'ny gilasy. Ireo mpizahatany dia takiana amin'ny fampisehoana zanatany ny corollaire an-dranomasina. Avy lavitra dia mora misaratsaraka amin'ny penguins izy ireo, fa tsy toy ny farany, ny fodiana dia kely kokoa ary afaka manidina. Ireo mpizahatany any amin'io faritra io dia miely be fa tsy miraharaha azy ireo ny vorona.
Fialam-boly iray hafa amin'ny làlana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Serrano dia ny riandrano izay midina avy eny amin'ny vato avo. Ny loharano dia mandehandeha any amin'ny farihy, ary mamakivaky ala kely. Ny renirano iray dia mirotsaka avy hatrany amin'ny renirano iray, eo amin'ny 100 metatra eo ho eo, izay miala avy hatrany mankany amin'ny faritry ny ranomasina.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Serrano Glacier?
Sarotra ny miditra amin'io toerana io, noho izany, azonao atao ny manatratra ny toerana voatondro fotsiny amin'ny ranomasina, ny lalana dia avy amin'ny tanànan'i Puerto Natales . Aorian'ny famoahana ny tany, mankany amin'ny glacier Serrano dia mitarika fanadihadina, izay handalo ireo mpizaha tany. Ny ora fitanterana dia ora telo eo ho eo. Afaka mandeha amin'ny fahagagana mangatsiaka ianao ao anatin'ny 15 minitra. Satria efa akaiky io fandraketana io dia azo atao ny mamoaka ny isa tsirairay.
Inona no tokony hatao mba hatory?
Nahoana isika no manonofy ny ranomandry amin'ny fahavaratra?
Amin'ny inona ny manao mokasinina fotsy?
Ny sakafo matsiro ho an'ny fahaverezan-danja - sakafo
Sakamahazo vita amin'ny mofo vita amin'ny mofo
Ny fiainan'ny mpandray anjara Richard Armitage
Diet Pegano miaraka amin'ny psoriasis
Famafazana karazana "kintana" amin'ny tarehy misy laser
Lasopy siramamy - votoatin'ny kaloria
Ahoana ny fanesorana ny tavin-kena?
Safidy mba hamitana ny fasan'ny trano manokana
Fanomezana ho an'ny lehilahy nandritra ny 50 taona
Taurus sy Libra - fifanarahana amin'ny sehatra maro samihafa
Pencil amin'ny efitra fandroana
Kofehy vita amin'ny labiera
Bakomà ao anaty vilany iray ao anaty lafaoro - ny fomba tsara indrindra mahandro sakafo mahandro sakafo